RAGGA GUURSADAY EE MACAANKA IYO RAAXADA GALMADA SOO ARKAY MAKA CAAFIMAAD BADAN YIHIIN KUWA AAN WALI GUURSAN EE RAAXADA XALAASHA AH AAN SOO ARKIN - Hablaha Media Network
HMN:- Daraasad cusub oo lagu daabacay wargeyska “ The journal of muslim marriage” ayaa muujisay in marka dadka guursaday ay keli noqdaan iyaga oo kala taga ama midkood dhinto, in uu ku dhaco wax kabadan caadiffadda oo ka lunta. Badanaa waxa soo foodsaara hoos u dhac dhanka caafimaadka jidhka ah kaas oo aanay si buuxda uga soo kaban Karin xataa haddii ay mar labaad guursadan.
“ waxaan idinku adkaynayaa in haddii aydin guurka dhibtiisa maarayn kar ayn, ay fiicantahay in laga joogsado. Furriinkuna wuxu carqalad ku noqon ayaa noloshaada, laakiinse guurka isqab qabsigiisu jiitamo mudo badan wa xa dhaama furriinka” sidaas waxa yidhi kiecolt Glaser oo ah saynisyahan reer Ohio ah.
Ugu danbayn,waxa cad in guurku ka caafimaad iyo wanaag badan yahay furriinka ama burburka qoyska, ayna tahay in wax badan laga war ware ego furriinka oo aan lagu degdegin. Si hadaba furriinka loo yareeyo waa in marka hore guurka lagu aasaasaa wanaag iyo is afgarad iyo is taageerid.